कतारमा हामी लगभग अर्धभूमिगत रुपमा काम गर्दैछौंः रिमाल - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
गत साउन यताको ७ महिनामा ३ लाख २० हजार २ सय ८० नेपाली बैदेशिक रोजगारीका लागि औपचारिक बाटो भएर विदेश गएका छन् । यसमध्ये सवैभन्दा धेरै नेपाली मलेसिया गएका हुन् । पहिल्ला केहि बर्षयता मलेसिया नेपालीको मुख्य गन्तव्य देश हो ।
बैदेशिक रोजगारका क्रममा जति नेपाली विदेशमा थपिंदैछन् समस्या पनि उति नै धेरै छन् । सरदर दैनिक चारवटा लाश नेपाल आइपुग्नुले नेपालीले विदेशबाट कमाएर पठाउने रकममा उनीहरुको पसिना, आँशु मात्र होइन रगत पनि मिसिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
स्वदेशमा श्रमिकको अधिकारका लागि विभिन्न ट्रेड यूनियनहरु क्रियाशिल छन् । त्यसमध्ये नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफण्ट) एक हो । उसका झण्डै चार लाख सदस्य छन् । जिफण्टले केहि बर्षयता कोरिया, मलेसियासँगै खाडीका देशहरुमा पनि जिफण्ट सहयोग समुह बनाएर काम गरिरहेको छ ।
सहयोग समुह मार्फत जिफण्टले समस्यामा परेका प्रवासी श्रमिकलाई कसरी सहयोग गर्छ त ? यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेश डटकमका लागि सुनिल न्यौपानेले जिफण्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालसँग गरेको कुराकानी ।
अनी खाडीका देशहरुमा पनि केहि समययता जिफण्ट सहयोग समुह बन्दै छ । त्यहाँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ ? कतारमा चाहिं समस्या पर्नासाथ हाम्रा साथिहरु दुईटा ठाउँमा दौडिने हो । एउटा नेपाली दुतावास र अर्को त्यहाँको श्रम अदालत । कतारमा हाम्रो दुतावासमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । हामी अप्ठ्यारो पर्दा त्यहाँको एनआरएनको सहयोग पनि लिन्छौं । हामीले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंगठन मार्फत भएका भ्रमणहरुका क्रममा त्यहाँको सरकारी निकायसँग पनि सम्वन्ध बनाएका छौं । तसर्थ केस नपरेसम्म उद्धारका लागि दुतावास मार्फत सहयोग गर्ने र केस परिसकेको छ भनें त्यसका लागि पर्ने आवश्यक सहयोग हामी गर्छौं ।
मुख्य समस्या 'एक्जिट पर्मिट' नदिने हो । त्यसैले हामीले 'एक्जिट पर्मिट'को व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भनेका छौं । उनीहरुले एक्जिट पर्मिटको व्यवस्थालाई सरल बनाउने तर एउटा रोजगारदाताले रकम तिरेर ल्याएको श्रमिक अर्कैकोमा काम गर्न जाने व्यवस्था भएमा त्यसले निम्त्याउने समस्यामा चिन्तित छौं भनिरहेका छन् । हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकारको हनन् गर्नु हुन्न भनेर उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
कतारमा अन्त्य भएको एउटा सपना (भिडियो सहित )